Medical non-leh tolmo wanaagsan dhar - Shiinaha Yixin
bacda furitaanka - Flat
dhar Non-dhar, waayo, xafaayadda
dhar non-leh tolmo wanaagsan Medical
brand YIXIN non-leh tolmo wanaagsan waxyaabaha dhar
asal ahaan magaalada Gaomi, Gobolka Shandong, Shiinaha
dabaqi karo Dadweynaha
wax Non-xidhka daabaca dhar
midabka midab badan ee doorashada.
faahfaahinta la kartoo
dhumucdiisuna dhar la kartoo
isticmaasho Ku haboon Baakadaha guud, bacaha hadiyad, bacaha shopping, bacaha dharka, bacaha qurxinta, bacaha gogosha, dallacaadaha advertising, hadiyado ganacsiga, Feestooyinka, abaalmarinta xusuus, carwooyinka ganacsiga, dabaal-guuradii, xafladda Furitaanka, qorshaynta xiriirka dadweynaha, iwm
Difaan nonwoven Medical
nonwovens SMS Medical leeyihiin multi-lakabka bond gaar ah miiqeen oo dhalaaliyey isku darka Suurka. Waxa uu ku breathable wanaagsan halka isagoo guryaha caqabad sare. Intaa waxaa dheer, dhar siinayaa jilicsan, dareento raaxo leh. Tani waa wax cayriin ee wax soo saarka wanaagsan caafimaad iyo badbaado ah, oo daacad ah injiilka in shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka keenaa. Nonwovens SMS hubkaas ayaa loo isticmaalaa in sahayda qalliinka caafimaadka iyo wax soo saarka ilaalinta nadaafada.
Previous: Non - go'yaha leh tolmo wanaagsan qalabka nadaafadda
Next: dhar non-leh tolmo wanaagsan Calendered
100 Polyester Fabric dahaarka
100% Cotton Non-xidhkii Fabric
100% Polyester Non-xidhkii Fabric Roll
100% pp Spunbond Non-xidhka daabaca Fabric
Environmental Non-xidhka daabaca
Dahaaray pp Non-xidhkii
Metalized Non-xidhka daabaca Fabric
Non-xidhkii Polypropylene Rolls
Non-xidhka daabaca Fabric Roll
Nonwoven Hard dareemay
dhar Non-dhar, waayo joodari
Non - go'yaha leh tolmo wanaagsan qalabka nadaafadda
dhar PP Non-xidhka daabaca
Hydrophilic & Biyaha celisa Nonwovens
retardant olol - go'yaha non-leh tolmo wanaagsan for a ...
wax Filter dhar non-leh tolmo wanaagsan gaar ah